ဒေါက်တာ ဆာဆာ ရဲ့ ခုမနက် Generation Z ကိုပေးစာ – Shwe Myanmar
Posted on March 5, 2021 March 5, 2021 by Shwe Myanmar
Generation Z ကိုပေးစာ
ကျေးဇူးပြု၍ Generation Z အဖွဲ့ဝင်အားလုံးကိုမျှဝေပါ ချစ်ခင်ရပါသောမြန်မာနိုင်ငံရဲဘော်ရဲဘက်များ၊ သင်၏စာနှင့် အစီရင်ခံစာများကို ကျွန်ုပ်လက်ခံရရှိပါပြီ သင်၏စာများနှင့် အစီရင်ခံစာများကို ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များထံ ပေးပို့ရန်မှာ ကျွန်ုပ်တာဝန်ဖြစ်သည်။ ငါဟာမင်းရဲ့အသံပဲ၊
ငါကမင်းကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ကိုယ်စားပြုတယ်။ မင်းနဲ့အဆုံးအထိ ရပ်တည်မယ်လို့ ကတိပေးတယ်။ မင်းဒါကိုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင် ငါဟာလူသားတွေရဲ့ရာဇ ၀ တ်မှုများစွာခံစားခဲ့ရပြီး၊ တာရှည်လွန်း။ လူသားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အသက်စွန့်ခဲ့သည်။ ဒီကြောက်မက်ဘွယ်ကောင်းတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုတရားစီရင်မှာပါ။
Letter to Generation Z
Please share to all members of Generation Z
Dear Comrades and Heroes of Myanmar,
I have received your letters and reports. It’s my duty to take these your letters and reports to world leaders around the globe.
I am your voice, I represent you to International Communities, I promise to stand with you and for you till the end.
As you have done it, I also have laid down my life for the freedom of our people who have suffered crimes against humanity for so much and for far too long.
These terrible terrorist group will be brought to justice , their acts of terrorism will not away unpunished.
Democracy will prevail in Myanmar
Freedom will prevail in Myanmar
Federal will prevail in Myanmar
Justice will be served in Myanmar
Generation Z ကိုပေးစာ
ကြေးဇူးပွု၍ Generation Z အဖှဲ့ဝငျအားလုံးကိုမြှဝပေါ ခဈြခငျရပါသောမွနျမာနိုငျငံရဲဘျောရဲဘကျမြား၊ သငျ၏စာနှငျ့ အစီရငျခံစာမြားကို ကြှနျုပျလကျခံရရှိပါပွီ သငျ၏စာမြားနှငျ့ အစီရငျခံစာမြားကို ကမ်ဘာတဝှမျးရှိ ကမ်ဘာ့ခေါငျးဆောငျမြားထံ ပေးပို့ရနျမှာ ကြှနျုပျတာဝနျဖွဈသညျ။
ငါဟာမငျးရဲ့အသံပဲ၊ ငါကမငျးကိုအပွညျပွညျဆိုငျရာ အသိုငျးအဝိုငျးမှာ ကိုယျစားပွုတယျ။ မငျးနဲ့အဆုံးအထိ ရပျတညျမယျလို့ ကတိပေးတယျ။ မငျးဒါကိုလုပျပွီးပွီဆိုရငျ ငါဟာလူသားတှရေဲ့ရာဇ ၀ တျမှုမြားစှာခံစားခဲ့ရပွီး၊ တာရှညျလှနျး။ လူသားမြား လှတျမွောကျရေးအတှကျ အသကျစှနျ့ခဲ့သညျ။ ဒီကွောကျမကျဘှယျကောငျးတဲ့အကွမျးဖကျအဖှဲ့ကိုတရားစီရငျမှာပါ။
Previous PostPrevious Myanmar Academy ဆုရှင် သရုပ်ဆောင် ” ခန့်စည်သူ “အား တရားဝင် ပိတ်ပင်ခြင်း
Next PostNext ယခု အသုံးပြုနေတဲ့ TEAR GAS မျက်ရည်ယိုဗုံးအကြောင်း သိကောင်းစရာနဲ့ ကာကွယ်ရမယ့် နည်းလမ်းများ (အသုံးဝင်တာမို့ ရှယ်ပေးကြပါ)